I-Incredible Sunsets evela ku-Modern Beachfront Estate B - I-Airbnb
I-Incredible Sunsets evela ku-Modern Beachfront Estate B
Playa Potrero, Costa Rica, Provincia de Guanacaste, i-Costa Rica
Siyakwamukela ku-11,500 sq ft ekhaya lethu likanokusho, i-Casa Isabella, ifa eliqanjwe ngendodakazi yethu. I-Casa Isabella iwukwakhiwa okusha sha okuhlinzeka ngezakhiwo zesimanje ngaphakathi nangaphandle ezinophahla olude, amafasitela anwetshiwe, ukubukwa okumangalisayo, umoya ohelezayo wolwandle, nokushona kwelanga okumangalisayo. Sikhuthazwe ubuhle bemvelo baseCosta Rica futhi sifake imvelo endaweni enabatshali kuwo wonke amaleveli.
Itholakala ngokuqondile ngasogwini lolwandle olungamakhilomitha angu-2.5 e-Playa Potrero enamazinga amathathu abheke ulwandle, i-Casa Isabella ihlanganisa ingadi yangasese eyenziwe ngobungcweti enompheme ophambi kolwandle amahora okushona kwelanga. Isango eliyimfihlo livulelwa olwandle olunesihlabathi ukuze nihambe nje, nicwiliswe olwandle, ukugibela ama-paddle boarding noma ukubuka nje izikebhe zikaseyili zidlula. Itheku linamagagasi athambile azolile futhi amemayo ngamanzi afudumele abhukudayo. Ukubuka kwakho kufaka phakathi i-Catalina Islands 6 miles offshore, enye yezindawo ezifunwa kakhulu ze-scuba diving ne-snorkeling e-Costa Rica. Izikebhe ze-Dive zingafika lapho ngemizuzu eyi-10.
Ifa lonke lihlotshiswe ngobungcweti futhi lafakwa ngempahla eyenziwe ngokwezifiso. Kukhona ichibi langasese elinekhishi elingaphandle, igumbi elikhulu elinekhishi labapheki nendawo yokudlela yabantu abangu-14, kanye negumbi lezindaba. Wonke amagumbi okulala ayi-5 afaka amagumbi okugezela e-ennsuite nama-balcony angasese.
Indawo yaseCasa Isabella inezindlu ezimbili ezinkulu, ngayinye inamagumbi okulala angu-5 nezindlu zokugezela ezingu-5 ½ futhi ithatha izivakashi ezingaba ngu-12. Indlu ngayinye enkulu izimele ngokuphelele futhi ine-pool yayo, ingadi, ishawa yolwandle, isango lolwandle kanye nempahla yolwandle. Ngaphezu kwalokho, amagumbi amabili ezivakashi anamagumbi okugeza e-ensuite angabhukwa kuphela nendlu enkulu ehlalisa izivakashi ezi-2 lilinye. Ifa lonke lingakwazi ukuhlalisa izivakashi ezingu-28. Lolu hlu olwendlu eyodwa enkulu. Amakamelo esivakashi angangezwa ekubhukheni ngezindleko ezengeziwe ezingu-$100 ubusuku ngabunye kuncike ekutholakaleni. Buza mayelana nokuba khona kwenye indlu yethu enkulu. Izinkokhelo ezengeziwe ziyasebenza emicimbini yangasese. Sicela usithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
I-Casa Isabella isemphakathini wasogwini ophakathi kwebanga lokuhamba lezindawo zokudlela eziningi ezinhle njenge-Hemmingway's, i-Nita Coffee, i-Cerveceria Independiente (Indawo yotshwala), i-La Forketta, i-MerKdo (Igrosa) kanye nesikhungo sokuhamba ngomkhumbi. Ukuhamba imizuzu embalwa kukuyisa e-El Tiki, Coco Loco, Surf Box (Ikhofi), Sentido Norte, kanye neFruit Stand. Izinketho eziningi ezinhle eziseduze! I-Flamingo marina isemaphethelweni aseningizimu echwebeni ahlinzeka ngohambo lwemikhumbi lokushona kwelanga nokudoba okusezingeni lomhlaba.
1. Umbhede wenkosi
2. Umbhede wenkosi
3. Umbhede wenkosi - ungaguqula ube imibhede emibili ye-XL uma uceliwe
4. Umbhede wenkosi - ungaguqula ube imibhede emibili ye-XL uma uceliwe
5. Imibhede emibili kaQueen
6. I-Queen bed (idinga ukubhukha i-Guest Suite eyengeziwe)
Uma uhamba nezingane kanye nezingane:
Le ndlu yakhelwe imindeni enezingane. Sinezihlalo eziphezulu/izihlalo ezikhuthazayo, amaphedi okushintsha, amaphakethe nemidlalo, amabhavu ezingane, namathoyizi. Sicela usazise ukuthi uletha umntwana nokuthi udinga liphi igiya lomntwana, ukuze silungele ukufika kwakho. Isevisi yomzanyana ingahlelwa ngokucelwa.
I-Costa Rica iqanjwe njengelinye lamazwe asimeme kakhulu emhlabeni, futhi sicabangele ukusimama kuzo zonke izinyathelo ngesikhathi siklama futhi sakha le ndlu.
Sisebenzisa isistimu yokuthambisa amanzi endlini yonke ukuze sikhiphe ukungcola emanzini kampompi futhi sikwenze kuphephe ukuwaphuza ngokuqondile empompini. Ukuze kube lula, sihlunge amanzi esiqandisini, ukuze uthole ingilazi ebandayo yamanzi okuphuza ahlanzekile asuka efrijini. Lezi zinyathelo zisiza ekunciphiseni ukuthembela emanzini asemabhodleleni futhi zivimbele udoti wepulasitiki ukuthi ungangeni olwandle lwasendaweni nasezinhlelweni zemvelo.
Ukuze silondoloze imithombo yamanzi, sisebenzisa amanzi angcolile agaywe kabusha ukuze sinisele izitshalo eziningi ezimila endaweni yethu.
Isifunda saseGuanacaste saseCosta Rica singashisa futhi sibe nomswakama. Ukuze sidinge amandla amancane okupholisa indlu, siklame ama-overhang amakhulu ukuze sinikeze umthunzi owengeziwe. Sabeka izitshalo ophahleni ukuze sisize ukupholisa indlu futhi sakhe indawo eshisayo yesimanje.
Amakamelo ethu ane-air conditioning ngayinye, ngakho-ke ungakhetha izinga lokushisa elifanelana nawe kangcono futhi usebenzise amandla amancane lapho usendleleni.
Inkonzo yansuku zonke ifakiwe ngaphandle kwangeSonto. I-concierge yethu ingasiza ngokuhlela umpheki ozimele, igrosa yangaphambi kwesitoko, nohambo lwasendaweni.
Indawo yekhaya lethu nayo ilungile! Lalela imisindo yamagagasi ephahlazeka noma uchithe usuku lonke ugibela, u-snorkeling, ukubhukuda kanye ne-kayaking futhi eduze uzothola igrosa, izitendi zezithelo, izitolo zekhofi, nezindawo zokudlela. Ngokwami, sijabulele ikhwalithi enokuthula yendawo kanye nekhaya njengendawo engcwele, ekude ngokwanele nokuba matasatasa komhlaba kodwa ekulungele ngokwanele ukuba ugxumele emotweni ukuze ulande uhambo noma i-morning latte.
Izihehehehe zasendaweni & Nezinhle
I-Flamingo Beach 3 miles / 10 imizuzu
Conchal Beach 6 miles / 20 imizuzu
I-Tamarindo Beach 15 miles / 35 imizuzu
UDaniel Oduber Quirós International Airport (LIR) 25 miles / 50 minutes
I-Parque Nacional Palo Verde 50 miles / 2 amahora
I-Parque Nacional Rincón de la Vieja 50 miles / 2 amahora
I-Arenal Volcano 110 miles / 3.5 amahora
ubusuku obungu-7 e- Playa Potrero, Costa Rica
Hlola ezinye izinketho ezise- Playa Potrero, Costa Rica namaphethelo